Minecraft Earth သည်ယခုအခါမက္ကဆီကိုတွင်တရားဝင်ရပြီဖြစ်သည် Androidsis
Minecraft Earth သည်ယခုအခါမက္ကဆီကိုတွင်တရားဝင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
ကျနော်တို့က Minecraft Earth နောက်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Minecraft Earth နောက်တစ်မျိုးရဲ့ဗားရှင်းအကြောင်းလပေါင်းများစွာပြောနေခဲ့ဖူးတယ် Pokémon Go နှင့် Harry Potter: Wizards Unite ကဲ့သို့သောလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လျှောက်ပါ။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကဤဂိမ်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအချို့မြို့များတွင်စမ်းသပ်မှုအဆင့်တွင်စတင်သုံးစွဲလာခဲ့ရာအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် APK ကိုကိုင်ဆောင်ထားခြင်းနှင့်တရား ၀ င်မဟုတ်သောဖြန့်ဝေခြင်းကိုရယူရန်အခွင့်ကောင်းယူခဲ့သည်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မှသူတို့သည်ဤပြthisနာကိုသတိပြုမိလာသည် ယခင်ကခွင့်မပြုခဲ့သောအသုံးပြုသူအကောင့်အားလုံးကိုပိတ်ဆို့ပါ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမဖြန့်ချိမီနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုများကို ဆက်လက်၍ ကန့်သတ်ထားရန်အတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းသည်လက်ရှိအချိန်တွင်စိတ်ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိသည် မက္ကဆီကို၊ Australiaစတြေးလျနှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့သည်တရားဝင်ရရှိနိုင်သောနိုင်ငံသစ်များဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းလက်လှမ်းမီမှုအရှိန်အဟုန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထွက်လှိမ့်၌ရှိ၏! လူတိုင်းကို Minecraft Earth သို့သယ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အဓိကလုပ်ဆောင်နေသည်။ ဒီနေရာမှာယနေ့နိုင်ငံများပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အစောပိုင်းလက်လှမ်းမီမှုအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ?
- Minecraft Earth (@minecraftearth) အောက်တိုဘာလ 29, 2019
ဤနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံနှင့်အတူ Minecraft Earth ကိုတရားဝင်ရရှိနိုင်သည် နယူးဇီလန်၊ အိုက်စလန်၊ ဆွီဒင်မက္ကစီကိုနှင့်သြစတြေးလျ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် ၅ ခုမှတစ်ခုဖြစ်သည့်အခြားမည်သည့်နိုင်ငံမှမဆိုသင် Play Store ကို ၀ င်ရောက်ပါကသင်ယခင်ဂိမ်း၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုသာရယူနိုင်သည်၊ အကယ်၍ သင်စပိန်နှင့်အခြားလက်တင်အမေရိကရှိမည်သည့်နိုင်ငံ၌မဆိုနေထိုင်လျှင်သတင်းအသစ်ကိုစောင့်ရပါလိမ့်မည်။
Minecraft Earth သည်ရှုထောင့်အသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုသည် အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီး၊ ရှာဖွေ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ္ဘာမြေတစ်ဝှမ်းရှိဆောက်လုပ်သူများနှင့်စူးစမ်းရှာဖွေသူများ၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုရယူရန်၊ အစစ်အမှန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းအသင်းတစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်စိတ်ကူးရသောအရာအားလုံးကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိရိယာတွင် Minecraft Earth ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည် Android 8 (သို့) ဒီထက်မကစီမံသည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်နှင့်အမျှမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ဤ Minecraft ဗားရှင်းသစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မွေးစားခြင်းကိုကန့်သတ်နိုင်သည့်လိုအပ်ချက်တစ်ခု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Minecraft Earth သည်ယခုအခါမက္ကဆီကိုတွင်တရားဝင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
Huawei Mate X ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖန်သားပြင်သည်၎င်း၏ပေါ်လီမာအလွှာကြောင့်ခြစ်ရာများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်